Tiles taịl nile a na -ere ihe nrụpụta na onye na -ebubata ya Hanbo
Ahịhịa osisi achara
Ogwe osisi ngere
Azụ ọnụ ọgụgụ-B Cedar Shingles
Ogbe taịl nile
osisi taịl nile a na -eji osisi arụpụta ihe ndị a bụ osisi a na -emegharị emegharị (cedar, Scotch pine, spruce, fir Douglas, wdg.
Aha ngwaahịa taịl nile nke osisi
Ngwa ngwa ngwaahịa ogige, Ime ụlọ ịsa ahụ, teres, mbara ihu
Isi ihe Western cedar / Hemlock
Nha 30cm x 30cm / 40cm x 40cm / ahaziri
Agba ngwaahịa Osisi okike Agba / agba carbonize
Njirimara ngwaahịa Ebu àmà, corrosion eguzogide, Long ndụ
Ogologo ogo ndu 1 ọkwa
Ihe ndị e ji osisi rụọ bụ ihe a na -emegharị emegharị (cedar, Scotch pine, spruce, Douglas fir, wdg na -akwado ndị ahịa ịkọwapụta mmepụta osisi), antiseptik eke na osisi na -egosi ahụhụ. Enwere ike ịhazi ụcha na nha dịka mkpa ndị ahịa si dị. Ala ụlọ DIY a anaghị achọ iwu, enwere ike idobe ya ozugbo. Ala nwere ọtụtụ ebe nkwado na oche dị ala, nke nwere njigide siri ike na mmetụta ịkpa ike.
Oghere ụlọ osisi na -emepụta oghere mpụga dị okomoko na ịdị nso na okike. Site na njirimara nke iguzogide mmiri dị mma, iji ala ụlọ eke bụ ihe ọhụrụ maka oghere mpụga na odida ubi a dochiri anya taịlị ogige, taịlị n'èzí.
Osisi taịlị plastik-base na-agụnye slats nke osisi cedar sitere n'okike na-ejikọ ihe mkpuchi plastik na kposara. Okpokoro osisi dị warara ma nwee oghere n'etiti oghere ahụ ka mmiri ozuzo wee banye n'ime elu wee gbapụ ngwa ngwa, ebe mkpuchi plastik na -adịgide adịgide n'okpuru ihu igwe niile. Ihe mkpuchi plastik nwere ntụpọ na ala ka mmiri wee nwee ike ịgbapụ n'ụzọ dị mfe na -enweghị ntụpọ n'elu.
adaba iji na wụnye. Enwere ike wepu ngwaahịa a iji hichaa elu ala ma jikọta ngwa ngwa.
Taịlị osisi cedar, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na -adịghị emerụ ahụ, nwere ike igbochi nsị nke ụmụ irighiri ihe, na -egbochi nla, n'otu oge ahụ, mmiri anaghị egbochi, mgbochi, nwere ike imeghari na gburugburu ihu igwe adịghị mma, enweghị mmezi.
A ga-eji taịl osisi teedị cedar mee ihe maka mbara ihu dị n'èzí, ikpo okwu ikuku court ogige ogige, kichin na ime ụlọ ịsa ahụ.
Nke gara aga: Ahịhịa osisi achara
Osote: Ụlọ osisi a na -emecha rụọ
Achara Bam floor for N'èzí ojiji
Ogwe osisi sida maka ọrịre
Ọchịchịrị Bamboo flooring
Oghere ndina n'elu ahịhịa
Taịl nile nke ala
Ogwe osisi dị n'otu
Ejikọtara taịl na teepu na ahịhịa
Ejikọta taịl osisi osisi
Tiles Deck n'èzí
Oghere ụlọ a na -ete n'ala
Mgbakwunye taịl n'èzí
Ngidi ọdọ mmiri
Obi ebere Cedar Shingles
Ihe mkpuchi ime ụlọ Cedar
Oghere Pine Shingles
Azụ-ọnụ ọgụgụ Cedar Shingles
Ọla diamond Ching Shingles